Tsy fandriamphalemana :: Ahenoana feona kiririoka isak’alina eny Ampitatafika • AoRaha
Tsy fandriamphalemana Ahenoana feona kiririoka isak’alina eny Ampitatafika
Nisesisesy ny fanafihana sy vaky trano ary hala-botry teny amin’ny kaominina Ampitatafika, nandritra ny telo andro izao, araka ny vaovao voaray. Saika nahenoana feon-kiririoka isak’alina tamina fokontany vitsivitsy eny an-toerana. Mihorohoro ny mponina. Nambaran’ny mpitandro filaminana eny Ampitatafika fa tsy mbola nisy ny olona voasambotra, nandritra izay andro vitsy nahenoana antso vonjy amina fanafihana izay.
«Tsy marina ny hoe andian-jiolahy am-polony sy an-jatony no manafika. Ny henonay kosa dia ny fanafihana nahaverezana vola. Tsy nisy ny aina nafoy. Efa misy ny fepetra noraisina, toy ny fanampiana ara-pitaovana ny zandary sy ny fanamafisana ny bokim-bahiny», hoy Ramparaoelina Rado, Ben’ ny tanànan’ny kaominina Ampitatafika.
Misy andriamasom-pokonolona kosa manampy ny zandarimaria eny antoerana amin’ny fanaovana fisafoana sy famonjena antso ataon’ny olona mety ho niharan’ny asan-jiolahy.
«Tsy fantatra intsony ny zava-misy marina. Maheno antso vonjy amina toerana hafa izahay rehefa tonga amin’ny toerana nandehanana voalohany», hoy ny zandary eny Ampitatafika. Nambaran’ ny mpitandro filaminana hatrany fa nisy olona nana-poaka basy teny Ambohimangidy Ampitatafia ka nampihoroho ny olona tokoa. «Naheno olona nitsoka kiririoka io olona io dia nanapoaka basy. Mbola nanao toy izany izy, ny ampitso. Efa nampitandremina izy hanajanona izany mba tsy hampihorohoro ny mpiara-monina », hoy ihany ny zandary.
Fivahinianana tany Shina :: Nampitolagaga ny sinoa ry Rakoto Frah Junior
Fampianarana ambony :: Hitohy ny fitsirihana ireo manao diplaoma sandoka